खड्गमान सिंह « Nepal – the country of the Buddha and the Mt. Everest
सिंगापुर र हेल्सिन्की शिखर बार्ताको महत्व के? ramkshrestha.wordpress.com/2018/07/20/hel… https://t.co/lDTh3i9zGO2days ago
Mona Lisa controversy after World Cup celebration tweet. Recently EU Fines Google $5.1 Billion in Android Antitrust… twitter.com/i/web/status/1…2days ago
Britain says no plans to axe Gurkhas
FBI releases surveillance tapes of sexy Russian spy Chapman
« National Award Winner ‘Makdee’ Star Shweta Basu Prasad Arrested in Prostitution Racket (Video)
बिदेशका पुराना तर नेपालका नयाँ नारायणकाजी »
जेलबाट निस्केपछि राजा त्रिभुवनका कृपाले सिंहले प्रज्ञा राज्यलक्ष्मीसँग बिहे गरे । सिंह मन्त्री, राजदूत र अञ्चलाधीश पनि भए । उनले प्रथम दर्जाको गार्खा दक्षिण बाहु पनि पाए र त्रिशक्ति पट्ट दोस्रा पनि लाए । उनले मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेर राष्ट्र बनाउने सोच राखेका थिए । तर उनलाई विश्वबन्धु थापा र राजेश्वर देवकोटालाई झैं भाग्यले साथ दिएन । उनले नेपालका प्रायः सम्पूर्ण भूभाग र एसियाका साथै यूरोपका केही राष्ट्रको समेत भ्रमण गरेर अनुभव सङ्ग्रह गरे तर अनेक राष्ट्रघाति तत्वहरुको छिर्के झेल्नु परेकाले उनले मुलुकका लागि चाहेजति केही गर्न सकेनन् । वास्तवमा असल, महान् र त्यागीहरुलाई विटुलो पार्ने काममा पनि पञ्चायती व्यवस्थाले एउटा आधारभूत सिद्धान्त बनाएको थियो । त्यही पासोमा सिंह पनि फसेका थिए । यतिहुँदा हुँदै पनि उनले राजाको वकालतमा नै आफ्नो सम्पूर्ण जीवन फ्याँके । तर ‘जेल बाहिर चालीस वर्षमा उनले आफ्नो मन लेखे । त्यस कृतिमा उनले भनेका थिए ”पञ्चायतका जरा उखेल्नु एउटा नमूना मात्र हो हेर्दै जाउँ अझै केके उखेलिन्छ !” साँच्चे हो राजाका धुपौरेले सिंहजस्ता देशभक्तका पनि नाकमा घरिघरि नस हालिरहन्थे र यस्ता किसिमका क्रान्तिकारी किताब लेख्ने प्रेरणा दिइरहन्थे ।
खड्गमान सिंह १९६४ सालमा काठमाडाðको डिल्लीबजारमा दिलिपसिंह वस्नेत र दीर्घकुमारीको सुपुत्रका रूपमा जन्मे । उनले पटना विश्वविद्यालयबाट म्याट्रिक दिएपछि जनक्रान्तिमा हाम फाले । राणा विरुद्धको यज्ञमा समाहित हुँदा उनी चौबीस बर्षा थिए ।
सिंहले सदैव महात्मा गान्धीको जय मनाए र सधैं खादी कै पोशाक लगाए । उनी नेहरु, लेनिन, चाउ एनलाई, किमईल सुङको वकालत गरिरहन्थे । साथै उनी दशरथ चन्द, मैनाबहादुर खत्री, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, तुलसीमेहर श्रेष्ठ, चित्तधर हृदय, गोपाल पाँडे असीम, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, सिद्धिचरण श्रेष्ठ र श्यामप्रसाद शर्माको गीत गाएर थाक्तैन थिए ।
सिंहको राजनीतिक जीवन हिंसात्मक क्रान्तिकारी पथबाट सुरु भयो । तर जेलमा गहिरो चिन्तन र गीता अध्ययनले उनको हृदयमा हिंसाको छाप मेटियो । उनी भन्थे ”हाम्रो समानताको बाटो समन्वयवाद हो ।”
सिंह सुरुमा प्रजातन्त्र अथवा संसदीय व्यवस्थाको मागमा समर्पित भए तर प्रजातन्त्र आउने वित्तिकै उनी भौंतारिन थाले । त्यसपछि उनले फेरि भने ”पार्टी हानथापले राष्ट्रको सामूहिक उत्थान हुन नसक्ने हुँदा २००८ सालमै दलगत व्यवस्था नेपालको निम्ति उपयुक्त भएन ।” साथै राजाका अघिपछिका डुहुरे मुसाले काम गर्न नदिएको उनले सधैं गुनासो गरिरहे । उनी भन्थे ‘सामूहिक रूपमा साझा प्रक्रियाद्वारा देश निर्माण गर्ने बुद्धिजीवीको आस्था भएको सरकार हुनु अत्यावश्यक थियो तर मन्त्रीहरू बुद्धिजीवी नै खोजिदैनथ्यो ।” उनले क्रमशः आफ्नो राजनितीक जीवन पनि एक प्रकारको दूरभाग्यको नै ठानेका थिए । यतिहुँदाहुँदै पनि उनी नेपाली राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रुपमा राजाको आवश्यकतामा जोड दिन्थे ।
नेपालको परम्परा, भौगोलिक बनावटआदि उपर गढेर हेर्दा दलीय व्यवस्था काम लाग्दैन भन्ने अडानमा नै सिहको जीवन सकिएको थियो । उनी सिद्धान्तलाई भन्दा ब्यबहारलाई बढी जोड दिन्थे । उनी नेपालमा भोको नाङ्गो एक जना पनि नरहून् भन्थे । साथै उनी वसुदैव कुटुम्बकम्को भावना राखेर नै बाँचे । उनी निर्धानिमुखालाई हेला गर्ने प्रवृत्तिको घोर विरोधी थिए । अनि उनी मादक पदार्थलाई जीवन बर्बादको संज्ञा दिन्थे ।
सिंहकी श्रीमती पनि राजनीतज्ञ थिइन् । प्रज्ञाराज्यलक्ष्मी सिंह राष्ट्रिय पञ्चायतकी उपाध्यक्ष पनि थिइन् । तर खड्गमान सिंहले आफ्नी पत्नी प्रज्ञासँग अत्यन्तै थारै समय मात्र लहसिन पाए । उनीहरूद्वारा प्राप्त पुत्र नै सिंहको बाँचुन्जेलको लौरो भए ।
सिंह सधैं देश र जनसेवाको निम्ति नै लडे । जीवनको अन्तिम बेलामा आएर उनले भने ”मैले नेपालमा केही काम गर्न सकिन ।” जीवनमा त्याग गर्दागर्दै सिंहको २०५३ सालमा काठमाडौमा निधन भयो । त्यसपछि नेपालले उनको खोजीनिति नै पनि गरेन । राजनीतिमा लागेका झारेझुरेको समेत हुलाक टिकट प्रकाशनमा आयो र कौशीमा बसेर तमासा हेर्दै गरेको मानिसलाई झुक्किएर गोलि लाग्दा पनि शहिद बनाइयो । तर सिंहका बारे सरकारी तहले चासो नै राखेन । उनले जीवनको उत्तर्रार्धमा पनि भनेका थिए ”राजनीतिमा लाग्ने सबै स्वार्थी, कपटी र धुर्त हुँदैनन्, हृदयमा स्नेह र सेवापरायण, समता र सद्व्यबहार धारण गर्ने पनि हुन्छन् ।” तर नेपालका हकमा उनको सोचाइले कुनै धर्म निर्वाह गर्न सकेको देखिएन । नेपालीहरुका छातिभित्र संवेदनाको श्रोत नै सुकेकाले हिंजोको कालरात्रिमा नेपाल र नेपालीको उज्ज्वल भविष्यका लागि कठोर जीवन रोज्ने सिंहको योगदानको चर्चा हराउदै गयो । देशभक्त भएका कारण नै खड्गमान सिंह नेपाली राजनीतिमा असफल नै भएका हुन् त ? भन्ने प्रश्नले अब जरा गडिसकेको छ ।
This entry was posted on September 6, 2014 at 1:11 pm	and is filed under बिबिध. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.